Ihe 5 dị ịtụnanya I nwere ike iji WooCommerce | ECommerce ozi ọma
5 ihe ijuanya ị nwere ike ime na WooCommerce
WooCommerce bụ otu n'ime usoro ntanetị e-commerce kachasị ama na Internetntanetị, na n'agbanyeghị ọkwa nke ahụmịhe enwere ike ịnwe mgbe ị na-eji ya ma ọ bụ ecommerce n'ozuzu, ikike ya bụ ịpụta. Mgbe ahụ anyị na-eso Ihe 5 dị ịtụnanya ị nwere ike iji WooCommerce mee.
1 1. Mee ka ngwaahịa gị nwuo
2 2. Mepụta na ekenye aha mmado na ihe ntanetịpụta ngwaahịa
3 3. Nye ndị ahịa ohere ịgbanwe nsonaazụ ọchụchọ
4 4. Gbochie nyocha itinye ya na ngwaahịa niile ma ọ bụ ụfọdụ
5 5. Automate WooCommerce
1. Mee ka ngwaahịa gị nwuo
Ọ bụrụ na ị na-eji WooCommerce dị ka ikpo okwu Ecommerce, ị nwere ike ịmepụta ma gosipụta ngwaahịa gị kachasị pụta ìhè, ndị agbanweela ọnụahịa ha ma ọ bụ nke kwesịrị nlebara anya pụrụ iche na ibe obibi. Enwekwara ike itinye foto na ụdị ngwaahịa dị iche iche.
2. Mepụta na ekenye aha mmado na ihe ntanetịpụta ngwaahịa
WooCommerce nwere a Mgbatị iji mepụta akara mmado dị elu maka thumbnails ngwaahịa, nke a na-edozi nke ọma. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike kaa akara dị iche iche ihe ruru eru maka mbupu n'efu, ngwaahịa maka ọrịre, ngwaahịa na ma ọ bụ na ngwaahịa, wdg.
3. Nye ndị ahịa ohere ịgbanwe nsonaazụ ọchụchọ
Nke a bụ ihe ọzọ nke ihe ị nwere ike ime na WooCommerce na nke ahụ, dịka ọmụmaatụ, na-enye ohere ikpụcha ngwaahịa site na njirimara ha. Ikpo okwu nwere wijetị arụnyere nke na-enye ndị na-azụ ahịa ohere ịza ngwaahịa ndị egosiri na nsonaazụ ọchụchọ dabere na njirimara ahọrọ, dịka ọmụmaatụ agba ma ọ bụ nha.
4. Gbochie nyocha itinye ya na ngwaahịa niile ma ọ bụ ụfọdụ
Nyocha ngwaahịa Ha nwere ike inye aka mee ka ndị na-azụ ahịa nwekwuo obi ike, agbanyeghị ịnweghị ike ịnyocha nyocha na ngwaahịa niile. Maka nke a, ị ga-agbanyụ nyocha ma ọ bụ echiche ndị dabere na nke ọ bụla.
5. Automate WooCommerce
Al gbanye WooCommerce, Nwere ike ịnata ọkwa banyere ihe ndị dị mkpa dịka ikpe gbasara iwu ịzụta, kpọtụrụ gị, kwuo maka ihe ndị dị ugbu a, dozie nsogbu, wdg. Ọ bụ ụzọ dị mma iji chekwaa oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » 5 ihe ijuanya ị nwere ike ime na WooCommerce
Wayszọ 5 ịchekwa ego mgbe ị na-azụ ihe n'ịntanetị